फ्लोर क्रसपछि शाही भन्छन् : मलाई यही नै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने छैन – Nepal Press
फ्लोर क्रसपछि शाही भन्छन् : मलाई यही नै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने छैन
२०७८ वैशाख ४ गते १९:५३
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै सरकारको पक्षमा मत हाल्ने चार एमाले सांसदमध्येका एक हुन् कुर्मराज शाही । एमालेले उनीसहित तीन सांसदलाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निस्काशन गरिसकेको छ ।
कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकामा जन्मेका २०६४ साल र २०७० सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका थिए । २०७० सालको निर्वाचनमा आफूलाई हराउने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन अहिले उनले भूमिका खेलेका छन् ।
संसद पद गुम्ने जान्दाजान्दै उनी किन फ्लोर क्रस गर्न तयार भए ? यही विषयको सेरोफेरोमा नेपाल प्रेसले शाहीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :
कालिकोटमा झिनो मतले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग पराजित हुनु भएको थियो । अहिले उनकै सरकार जोगाउन पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नुभयो । के अब माओवादीमै लाग्न आँट्नुभएको हो ?
म माओवादीमा गएको होइन । तत्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी बा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ माओवादीमा जानुभएको हो । केपीले प्रचण्डसँग एकता गरेपछि मात्रै हामी गएका हौं । हामी उहाँकै पछि लागेका हौं ।
अहिले केपी बाले छोडेर जानुभयो । के कारण छोडनु भयो थाहा भएन । राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा परे । उहाँले रातारात दुई पार्टी एक ठाउँ ल्याउने काम गर्नु भएको हो । त्यही आधारमा पार्टी एकता भइ हामी त्यहाँ गएका हौं । हामी मुख्यमन्त्री पछाडी गएका होइनौं ।
त्यसोभए एमाले संसदीय दलको ह्वीप नमानेर फ्लोर क्रस गर्नुभएको किन ?
पहिलो कुरा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध पार्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यो कर्णालीबाट हामीले सुरुवात गरेका छौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले संकेत गरेका छौं ।
दोश्रो कुरा सिंगो नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एक ठाउँ आउनुपर्छ, एक ढिक्का हुनुपर्छ, अनि हाम्रो आगामी कार्यदिशा समाजवाद हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै हिजो हामीले फ्लोर क्रस गरेका हौं ।
चार जनाले फ्लोर क्रस गरेकै कारण वामपन्थी एकता चाहिँ हुन्छ कसरी ?
हुन्छ नि । पहिला वामपन्थी एकता भएकै होइन र ? नेकपा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा ल्याउने को हुन् भन्ने कुरा मैले बारम्बार भन्नै पर्दैन । त्यही एकताकै आधारमा हामी पछि हिडेका हौं । तीन वर्षसम्म हामी निरन्तर एकै ठाउँमा बस्यौं । सरकार सञ्चालन गर्‍यौं । प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालन गर्दै आर्थिक क्रान्तिको आधार हामीले सञ्चालन गर्दै थियौं ।
यो बीचमा उहाँहरुले किन झगडा गर्नुभयो, किन लड्नु भयो हामीलाई थाहा छैन र सूचना पनि आइसकेको छैन । पछि अदालतले विधिवत रुपमा आफ्नो ठाउँमा जाउ भनेर भनिसकेपछि आफ्नो ठाउँमा आयौं । हामीले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्‍यौं । तर एमाले एक ठाउँमा आइपुग्दा माधव नेपाललाई केपी समूहले कारवाही गर्ने कारवाही गरेर फाल्नुभो । पार्टीबाट हटाउनुभयो । त्यही हटाएको आक्रोस कर्णाली प्रदेशमा पोखिएको हो ।
हामी के भन्छौं भने अझै पनि एमाले एक बनाउने सम्भावना जीवित छ । एमाले एक बनाउने ढोका खुला छ । कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि समस्या छैन । एमाले एकढिक्का हास भन्ने चाहनाले नै हामीले त्यो काम गरेका छौं ।
तर, तपाईं आफैं कारवाहीमा परिसक्नु भएको छ । पार्टीबाट निश्कासित भएपछि माओवादी कित्तामा जानुको विकल्प नै भएन नि ?
होइन हामी माओवादी कित्तामा गएका छैनौं । त्यसो भए माधव नेपाललाई तपाई कुन कित्तामा गएको भन्नुहुन्छ ? हिजो महाधिवेशनबाट जितेर आएका भीम रावलसहितका नेताहरु कारवाहीमा परेका छन्, उहाँहरु कुन कित्तामा भन्नुहुन्छ ? हामी माधव नेपालका कित्ताका मान्छे हौं । स्पेशल हामी एमालेका मान्छे हौं ।
तपाईहरुले बकाइदा फ्लोर क्रस नै गरेर माओवादी सरकारलाई समर्थन गरेपछि यसले देशभरि नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला नि ?
प्रभाव देशभरि नै पार्छ, तर सकारात्मक पार्छ । देशभरि नै उथलपुथल आउँछ । केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल एक ठाउँमा आएनन् भने नेपालको सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा पर्छ । त्यसो भएको हुनाले एमाले मात्रै होइन वामपन्थी आन्दोलन एक ठाउँमा ल्याउन नेताको अलिकति भए पनि दिमाग फुरोस म यहि आग्रह गर्न चाहन्छु । नभए वामपन्थी आन्दोलन नै समाप्त हुन्छ ।
बल्लतल्ल आर्जेको संसद पद गएकोमा चिन्ता छैन ?
संसद पद भन्ने कुरा ठूलो होइन । वामपन्थी आन्दोलन ठूलो हो । हामीले हिजो कम्युनिष्ट भनेर, वामपन्थी भनेर सपथ खाएका हौं । माननीय पद भनेको जुत्ता हो । आज आउँछ भोली जान्छ यो चलिरहने प्रक्रिया हो । एउटा अध्याय हो त्यो पनि पाँच वर्षका लागि । हामीले आपूmलाई निजामती कर्मचारीजस्तो सोचेका पनि छैनौं ।
हामी जनप्रतिनिधि हौं । जनताको बीचमा राम्रो काम गरेका छौं भने जनताले फेरि पनि भोट हाल्छन् । नराम्रो काम गरेका छन् भने हराउँछन् । हिजोको फ्लोर क्रसपछि जनताले हामीलाई बधाई दिइरहेका छन् । पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण कदम भनेका छन् । वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका निम्ति साहस गरेको भनेर प्रशंसा गरेका छन् । एक-दुई जनाले बोल्दैमा केहि हुँदैन ।
तपाईको चानचुन अझै दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै कारवाहीमा पर्नुभयो, कालिकोटका जनताका लागि यो धोका होइन ?
हामीले त्याग गरेको हो । एमाले भनेर लागेको हो । कम्युनिष्ट भनेर लागेका हौं । पदलाई ठूलो मान्दै मानेका छैनौं । पद आउँछ जान्छ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन जीवित राख्नुपर्छ भनेर लागेका हौं ।
यो पद त हिँडदै जानेक्रममा बाटोमा भेटिएको चीज न हो । हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । माननीय पद पाउँदैमा समाजवाद आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छ र ? छैन नी । माननीय पद पाउँला र समाजवाद ल्याउँला भनेर हामी लागेकै होइनौं । समाजवाद ल्याउनका लागि एक कम्युनिष्ट कार्यकर्ता बन्दै हिँडिएको हो । यो ठूलो विषय नै होइन । जनताको विश्वास मैले जितेको छु ।
सरकारलाई भोट दिएको पुरस्कार त पक्कै पाउनुहोला । अब सरकारमा कुन मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारमा मन्त्री-सन्त्री बन्ने कुरा गौण विषय हुन । मलाई त्यो मतलबको विषय छैन । अहिले नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने कि नहुने प्रश्न यहाँनिर छ ।
भनेपछि तपाई मन्त्री पदको लाईनमा हुनुहुन्न ?
मैले भनिहाले नि, हिँडदै जाने क्रममा कुनै चीज प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्त भएन भने पनि केही भएन । मलाई यो वा त्यो मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने छैन । मेरो क्षमता, लगानीले भ्याउँछ भने जुन जिम्मेवारी दिए पनि म काम गर्न सक्छु, तयार छु ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ४ गते १९:५३
2 thoughts on “फ्लोर क्रसपछि शाही भन्छन् : मलाई यही नै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने छैन”
३ करोर सहित अझै मन्त्री पद पनिको आशा हो त क्रान्तिकारी काम्रेडको ?
राम प्रसाद चौलागाई says:
खै हो कुर्म जी तपाइको यो कामले सकियो कि जोगियो थाहा भएन, तर तपाइको नियत प्रस्ट भयो है! भोट माग्न कसरी आउनु हुन्छ हामी पनि पर्खिराखेका छौं है!